Wararkii ugu dambeeyay Shirka Dhuusamareeb - Awdinle Online
Kulamo ku saabsan Shirka looga hadlaayo Arrimaha doorashooyinka ayaa wali ka socda Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimada Galmudug, waxaana shirkaasi ku sugan Madaxda Sare dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda.
Shirka oo maanta furmay ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin xildhibanada gobolada Waqooyi ee lagu dooran doono Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in shirka maanta uu diiradda ahaa arrinta Somaliland, iyadoo Madaxda Dowlad Goboleedyada la hadleen Guddoomiye Cabdi Xaashi, laguna wargeliyay arrinta Somaliland inay ka soo heshiiyaan isaga iyo Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka, ayna wixii ay ka soo wada hadlaan u soo gudbiyaan shirka.
Majiro cid ma talaysay gobolada Waqooyi oo maanta ka qeyb gashay Shirka Arrimaha doorashooyinka ee socda Dhuusamareeb.
Maalinta Berri ah ayaa diirada lagu saari doona khilaafka ka dhashay guddiyada doorashooyinka, Gobolka Gedo iyo 13 Senator ee la siiyay gobolka Banaadir.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland & Wakiilka QM ee Soomaliya oo kulmay
Next articleSoomaaliya oo la keenayo tallaalka COVID-19